Farqiga u dhexeeya isbedelka cimilada iyo kuleylka adduunka | Saadaasha Shabakadda
Farqiga u dhexeeya isbeddelka cimilada iyo kuleylka adduunka
Sergio Gallego | | Isbedelka Cimilada
Badanaa waxaa loo isticmaalaa isku macno hab qaldan, ereyada isbedelka cimilada iyo kuleylka adduunka marka ay macnahoodu yahay laba waxyaalood oo gabi ahaanba kala duwan. Way cadahay in labada fikradood ay tilmaamayaan burburka haysta meeraha oo dhan gacanta nin iyo kuwa ku khasban dhakhso u daawee.
Waxaan si cad u sharaxi doonaa hoosta muxuu erey kasta ka kooban yahay si ay kuugu cadaato.
Marka khubaradu adeegsadaan ereyga isbeddelka cimilada, tixraac isbeddelo muhiim ah oo ku yimaada cimilada saameynaya dhinacyada sida heerkulka, roobka ama dabaysha oo dhacda dhowr iyo toban sano. Dhanka kale, kululaynta adduunka waxaa loola jeedaa kor u kaca joogtada ah ee heerkulka celceliska meeraha oo dhan.
Kulaylkaan waxaa sababa uruurinta gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo taasi waxay ku jirtaa jawiga iyo lafteeda wax kale ma aha dhinaca isbeddelka cimilada.
Shaki kuma jiro in isbeddelka cimilada waa dhibaato dhab ah oo dhab ah iyo in meeraha oo dhami ay kulaalayaan boodbood iyo soohdin. Sida laga soo xigtay qaar ka mid ah xogta lagu kalsoon yahay, heerkulka celceliska meeraha ayaa kor u kacay in ka badan 7 darajo qarnigii la soo dhaafay oo dhan. Seynisyahannadu waxay saadaalinayaan in celceliska heer kulka uu kordhayo 1.1 darajo ilaa 6.4 darajo inta lagu jiro qarniga XNUMX-aad, kuwani runtii waa xog walaac leh oo sababi doonta isbeddelo aad u khatar badan oo xagga cimilada ah.
Saameyntan xun ee isbeddelka cimilada ayaa dhaca maalin kasta iyo gudaha meel kasta oo meeraha ka mid ah. Meelo badan roobabku way sii kordheen waxayna sababeen daadad, halka gobollada kale ee Dunida, lidkeeda, ay ka jireen abaaro daran . Mawjadaha kuleylka inta lagu jiro bilaha xagaaga waa aad iyo aad u badan, keenaya tiro aad u badan oo dhimasho ah iyo tiro badan oo dabab ah oo kaymo wata.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Isbedelka Cimilada » Farqiga u dhexeeya isbeddelka cimilada iyo kuleylka adduunka
La Cala (@ayaankad) dijo
Waa salaaman tahay, ogsoonow, kaliya waxaan u malaynayaa inaad qalad samaysay markii aad dhahday heerkulku wuxuu kordhay 7 darajo qarnigii la soo dhaafay, waxa saxda ah wuxuu noqon lahaa 0.7, waxaan kaaga tagay xiriirkan oo waxtar yeelan kara.
Jawaab La Cala (@calamtz)
Shucaaca qoraxda ee meeraha Dunida
Raadi sababta ay fulkaanaha u qarxaan